FXCC START-UP NOKUDZIDZA BONUSES MITEMO & MITANGANO | FXCC
musha / FXCC START-UP NOKUDZIDZA BONUSES MITEMO NEMAGWARO
FXCC START-UP NOKUDZIDZA BONUSES MITEMO NEMAGWARO (AKANZIRWA)
Nguva Yokusimudzira: Izvi zvinokurudzira pa 30th yaDecember 2017.
Mitsva itsva uye iripo yeFXCC. (Standard kana XL mabhizinesi)
Anosarudza kuti asarudze kupinda muChipiro kuburikidza nekusimbisa pachena chisarudzo chake kuburikidza neVatengesi Hub, chikamu chebhonasi.
Vatengi vasingabatanidzi mune imwe nzira yekusimudzirwa neFXCC.
Kuwedzera: Maximum Leverage of Accounts anobatanidzwa mukukusimudzirwa ndeye 1: 200
Anokodzera Dhipatimendi: Mari yekuita mari inowedzera mari itsva yeAkodhikiti yekambani yebhizimisi rekutengesa kuburikidza nenzira yekubhadhara inopiwa neFXCC. Kupindira kwemukati, kuenzaniswa kwekugadziriswa, kubviswa kwekodzero iripo nekudzosazve zvakare, Kuburikidza kweChirangaridzo / Affiliate / Partner kana komisheni hakuzofungidziri mari itsva .
100% Kutanga-Kubha Bonus: nokuti chekutanga Anokodzera Dhipatimendi iyo inogadzirwa neAkwanisa Kutevedzeri mumakambani avo neFXCC panguva yekusimudzirwa Eligible Client ichagamuchira 100% Kutanga-Up Bonus mukati makumi maviri nemana (24) maawa ekushanda mushure mokunge gwaro rekutanga risati rapiwa. (Minimum first deposit inoshandiswa nepeji yeropa)
50% Mari Inobhadhara Mari: nokuti pashure / zvimwe Anokodzera MaDosti emadhora mashoma $ 100 US ayo anogadziriswa neVatengi Vanokodzera mumabhuku avo ega neFXCC panguva yekusimudzira Eligible Client ichagamuchira 50% Mari Inobhadhara mari mukati ma makumi maviri nemana (24) maawa ekushanda mushure mekunge zvakadai zvakawedzerwa / kuwedzerwa zvakagamuchirwa .
Bonus Credit inogona kushandiswa sekwereti yekutengeserana uye inogona kuwanika panhoroondo yebhizimisi 50 kalendari mazuva kubvira pazuva rekugamuchira Bonus ("kukodzera nguva"). Mushure mezuva rino, chero sarudzo yeBhonus Chikwereti ichabviswa kubva pakero.
Maximum Chikamu chezvose mabhonasi: The pamusoro-soro chiyero chezvose mabhonasi (kusanganisira zvose Kutanga-Up uye / kana mari yebhadharo) yakarongerwa neFXCC kune chero mupi weEgligible Client panguva ipi zvayo haikwanise kudarika mari yose ye $ 10,000 US (kana yakaenzana).
Mutengi 'A' 1st dhipoziti $ 1,000 ▶ Mutengi 'A' achagamuchira chikwereti $ 1,000 (kureva 100%) seKutanga-Up Bhonasi;
Iyi bhonasi icharatidza nezvekambani yeMuteereri sezvinotevera:
musaridzwa Nokutendeka Chikwereti (Iripo Bonus) Inowanikwa (Yerusununguko) Margin
Zvadaro, Mutengi 'A' akaita 2nd dhipoziti $ 3,000 ▶ Mutengi 'A' achagamuchira chikwereti $ 1,500 (kureva 50%) seMari Bonus
Mutengi 'B' 1st dhipoziti $ 15,000 ▶ Mutengi 'B' achagamuchira chikwereti $ 10,000 seKutanga-Up Bhonasi.
Zvadaro, Mutengi 'B' akaita 2nd isa $ 5,000 ▶ Mutengi 'B' anoda kwete gamuchira mamwe mabhonasi.
Max Total Bonus mhindu haigone kudarika $ 10,000
FXCC inotarisira kodzero yekuderera chero chikumbiro cheBhonasi pamusana pekuziva kwayo, pasina chikonzero chekupa chero chikonzero kana kutsanangura zvikonzero zvekudaro kuderera.
Bonus ichawedzerwa kuAdgible Client's account account sekwereti, The Bonus inotarisirwa nekutengeserana chete uye haigoni kurasikirwa. Chero ipi inobhadharwa inoshandiswa nekutsvaga mari yebhonasi inogona kubviswa kubva kubhuku pasina chero kunonoka.
Kubviswa kwemari kubva kuAgligible Accounting Client account kunobvumirwa muchikamu kana zvakakwana uye izvi zvinokonzera kuti Bhood Credit yakaderedzwa maererano nekuenderana.
Mutengi 'C' ane chikamu chinotevera chiripo munhoroondo yake:
Mutengi 'C' akumbira madhora zviuru zviviri kubviswa ▶ Bhonasi rakagamuchirwa richaderedzwa ne $ 2,000.
Izvi zvichange zvichitarisa paAtekero yeCenter sezvizvi:
Mutengi 'C' akakumbira kubvisa iyo yakazara huwandu ($ 7,000) ▶ Bhonasi inogamuchirwa ichabviswa zvachose.
Cashback: Bonus Credits ichagadziriswa zvishoma uye ichishandurwa kuva Balance inobviswa pakarepo mushure mekupedza basa rega roga pasinei nemari inotevera pandima inotevera.
Kuitwa kweiyo 1 mujenya mhepo yakatarwa kunotendesa huwandu hwe $1.0 (kana kuti yakaenzana) kubva kuBhonus Credit kuti ibvise kushandiswa.
Muteveri 'D' ane chikamu chinotevera chiripo mubhuku rake rekutengesa:
Mutengi 'D' akatengesa kutengeserana kwakazara kwe1 mwero mujenya EURUSD (kureva akavhura ndokuvhara odha), nemari yemadhora zana ▶ Izvi zvakawedzera zvinotevera zvimwe zviviri zvakapinda munhoroondo yeakaunzi:
Chikwereti - $ 1.0 (kureva kuti mari yebhonasi yakabviswa kubva kune chikwereti)
Bonus Deposit $ 1.0 (kureva kuti mari yebhonasi inoshandurwa ikava mari chaiye uye yakawedzerwa kuenzanisi yebhuku).
Uye yakaratidzwa pane nhoroondo yemari sezvinotevera:
Pakati pekugadzirisa nguva kana chikero chekodzero yekweretesi chekweretesi (kusanganisira mararamiro anoterera uye kurasikirwa) inosvika kune imwechete yakaenzana kana pasi 30% kubva kune iripo maBhonus Credit (mune mamwe mazwi: kuenzana kwebhuku kunosvika pachiyero chakaenzana kana pasi pe130% yeBaus bonisi chikwereti), mari inowanikwa yeBhonus Credit ichabviswa zvachose (chikwereti), kuchengetwa mune imwe "Akachengetedza Aunti" yakasiyana uye ichashandiswa kupa mubairo weArigible Client inotaurwa pamusoro pezvimwe zviitiko zvakasarudzwa zvakaitwa pamwe chete nemari yakasara yebhuku iyo maererano nechikamu 10 kusvikira pakuguma kwekukodzera nguva.
- 30% yeBhonasi iripo (chikwere) = $ 300
Kufunga kuti Mutengi 'D' ane bhizinesi rakavhurika ye1 lot EURUSD ine yazvino kurasikirwa kwekuyerera kwemadhora mazana manomwe, izvi zvinoreva ▶ Balance + Inoyangarara purofiti / kurasikirwa = $ 700 - $ 1,000 = $ 700
Muchiitiko ichi, bhonasi ichakurumidza kubviswa uye icharatidza pamusoro pebhuku sezvizvi:
$1,000 $300 $0 Hapana Mhara Yakasununguka
Kwemabasa ekumazuva ano uye emangwana panguva yekugadzirisa nguva, Mutengi achatambira mari ye $ 1.0 pengozi iyo ichaderedzwa kubva kubhuku rekuchengetedza.
- Pamusana pemamiriro emisika emisika anogona kuramba achiita, zvingave zvisiri nyore nguva dzose kubvisa Bonus (chikwereti) panguva chaiyo ye30%.
- Zvose zvinowanzoita mazita ekutengesa zvicharamba zvichiitika panguva dzose pasinei kana chikwereti chichiri mubhuku revatengi kana kwete.
FXCC haigoni kutongerwa chero kudanwa kana kurasikirwa kweMarike iyo Mutevedzeri angatambura, kusanganisira asi kwete kumira kurasikirwa nekuda kweKusimuka-Nhamba, kana Bonus ichibviswa pane chero chikonzero maererano nemitemo nemitemo iri pano.
FXCC inochengetedza kodzero, pamusana pekuchenjera kwayo, kuregeredza chero munhu upi zvake anoputsa Mitemo yeMitemo uye / kana imwe yemitemo nemitemo yeFXCC.
Chero chiratidzo chekunyengedza kana mamwe maitiro ekunyengera kana kubiridzira mubhuku chero ripi zvaro reKiendesi yebhizimisi kana zvimwe zvakabatana kana kuti zvakabatanidzwa neBhonus Credit hazvizogadziri zvose zveBhizimisi Bonuses.
FXCC inochengetedza kodzero, sezvo inenge iine kungwara kwayo inoona yakakodzera, kugadzirisa, kugadzirisa, kusimudzira, kubvisa kana kuvhara Chipo, kana chimwe chezvinhu zveMupiro, chero nguva nekukupa chiziviso nemavhidhiro emukati kuburikidza neInternet Trading System, kana ne email kana nekuisa chiziviso paIndaneti yedu. Tichaedza kukupa maziso matatu (3) Bhizinesi Mazuva ezvakashandurwa kunze kwekunge zvisiri izvo kwatiri kuti tiite kudaro.
Mutevedzeri anofanira kutorwa sekubvuma kuchinja kunze kwekuti Mutengi akaudza Kambani kuti Muteereri haagamuchiri kuchinja uye anoda kubvisa chipo. Mutengi haafaniri kubhadhara chero mhosva pamusana pekugumisa munyaya iyi, kunze kwemari inokwana uye inobhadharwa neHurumende inopiwa kusvikira ipapo.
Pasinei nemamiriro ezvinhu FXCC inofanira kuve nemhosva kune mimwe migumisiro yekuchinja kupi zvako, kuchinjwa, kusimudzirwa, kubviswa kana kupera kwekusimudzira.